တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ခင်ပွန်းကို တရားဝင်ကွာရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ပါတီပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး - Mckzone Daily
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ခင်ပွန်းကို တရားဝင်ကွာရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ပါတီပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
မကြာသေးမီက အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ခင်ပွန်းအား ကွာရှင်းပြတ်စဲနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် လွတ်လပ်သွားတဲ့ဘဝကိုဂုဏ်ပြုဖို့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံများကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင်ပြသခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် Aira ဟုလည်းလူသိများတဲ့ Twitter အသုံးပြုသူ @airawr_ က “ကွာရှင်းခြင်းကိုမကောင်းတဲ့အရာလို့အမြဲမြင်တယ်။ ဒါမဲ့ နောက်ဆုံးမင်းကမတရားပြုကျင့်မှုကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ အဲ့တာက မကောင်းတဲ့အရာလို့မမြင်ရတော့ဘူး ၊ ဒါကြောင့် ငါ့ရဲ့လွတ်လပ်မှုကို ငါကိုယ်တိုင်ဂုဏ်ပြုတယ် ၊ ကောင်မလေးတွေ၊ နင်တို့နဲ့အတူပေါဖို့ ငါဒီမှာရောက်နေပြီ ” ဟု ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ထို့ပြင် Aira ဟာ သူမရဲ့မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းများနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲအသေးစားလေးတစ်ခုရဲ့ဓာတ်ပုံများစွာကိုလည်းမျှဝေခဲ့ပြီး ၎င်းဟာ အလွန်ပင်ပျော်စရာကောင်းခဲ့ပုံရပါတယ်။ အပန်းကိုမှ ကွဲပြားတဲ့ပန်းရောင်ဝတ်စုံမျိုးစုံအား ဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူမတို့အဖွဲ့ဟာ အဆင်မြင့်လက်ဖက်ရည်နှင့် မုန့်မျိုးစုံဖြင့်တည်ခင်းနေကြတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့မှာ “Fabulous Mrs to Ms” ဟုဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ပူဖောင်းတစ်လုံးလည်းရှိနေပါတယ်။
Netizen များက သူမအား ကြင်နာတဲ့ဆုတောင်းစကားများနှင့် သူမတွေ့ရှိလိုက်တဲ့အသစ်သောလွတ်လပ်မှုအတွက် သူမကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ “ ရိုးသားစွာ Congrats !!!! ပါ ၊ မင်းရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းက အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရှက်စရာတစ်ခုလို့ social media ကသာပြောကြတာ ၊အမှန်တော့ ဒါဟာမင်းအတွက် လွတ်လပ်ခွင့်ပါဘဲ ၊ မင်း ဒီထပ်ပိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရပါစေ ” ၊ “ “ဒါကသေချာပေါက် အသစ်အဆန်းတစ်ခုပဲ၊ ဒါမဲ့ ဘဝကပျော်ဖို့တိုတောင်းလွန်းတယ်၊ မင်းအနိုင်ရမှုတိုင်းကိုဂုဏ်ယူလိုက်ပါ ၊ မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ် ” ဟူတဲ့အပြုသဘောဆောင်မှန်ချက်များစွာဖြင့် တုံ့ပြန်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
မကွာသေးမီက အမြိုးသမီးတဈဦးဟာ ခငျပှနျးအား ကှာရှငျးပွတျစဲနိုငျခဲ့ပွီးနောကျ လှတျလပျသှားတဲ့ဘဝကိုဂုဏျပွုဖို့အခမျးအနားတဈခုကိုပွုလုပျခဲ့တဲ့ဓာတျပုံမြားကို လူမှုကှနျယကျပျေါတှငျပွသခဲ့ပါတယျ။ စကျတငျဘာလ ၁၆ ရကျနတှေ့ငျ Aira ဟုလညျးလူသိမြားတဲ့ Twitter အသုံးပွုသူ @airawr_ က “ကှာရှငျးခွငျးကိုမကောငျးတဲ့အရာလို့အမွဲမွငျတယျ။ ဒါမဲ့ နောကျဆုံးမငျးကမတရားပွုကငျြ့မှုကနလှေတျမွောကျသှားတဲ့အခြိနျမှာတော့ အဲ့တာက မကောငျးတဲ့အရာလို့မမွငျရတော့ဘူး ၊ ဒါကွောငျ့ ငါ့ရဲ့လှတျလပျမှုကို ငါကိုယျတိုငျဂုဏျပွုတယျ ၊ ကောငျမလေးတှေ၊ နငျတို့နဲ့အတူပေါဖို့ ငါဒီမှာရောကျနပွေီ ” ဟု ရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
ထို့ပွငျ Aira ဟာ သူမရဲ့မိနျးကလေးသူငယျခငျြးမြားနှငျ့ပွုလုပျခဲ့တဲ့ပှဲအသေးစားလေးတဈခုရဲ့ဓာတျပုံမြားစှာကိုလညျးမြှဝခေဲ့ပွီး ၎င်းငျးဟာ အလှနျပငျပြျောစရာကောငျးခဲ့ပုံရပါတယျ။ အပနျးကိုမှ ကှဲပွားတဲ့ပနျးရောငျဝတျစုံမြိုးစုံအား ဝတျဆငျထားတဲ့သူမတို့အဖှဲ့ဟာ အဆငျမွငျ့လကျဖကျရညျနှငျ့ မုနျ့မြိုးစုံဖွငျ့တညျခငျးနကွေတာကိုတှမွေ့ငျနိုငျပါတယျ။ ထို့ပွငျ ၎င်းငျးတို့မှာ “Fabulous Mrs to Ms” ဟုဆိုတဲ့ထူးခွားတဲ့ပူဖောငျးတဈလုံးလညျးရှိနပေါတယျ။
Netizen မြားက သူမအား ကွငျနာတဲ့ဆုတောငျးစကားမြားနှငျ့ သူမတှရှေိ့လိုကျတဲ့အသဈသောလှတျလပျမှုအတှကျ သူမကိုခြီးကြူးဂုဏျပွုခဲ့ကွပါတယျ။ “ ရိုးသားစှာ Congrats !!!! ပါ ၊ မငျးရဲ့လကျတှဲဖျောကိုကှာရှငျးပွတျစဲခွငျးက အထူးသဖွငျ့အမြိုးသမီးတှအေတှကျရှကျစရာတဈခုလို့ social media ကသာပွောကွတာ ၊အမှနျတော့ ဒါဟာမငျးအတှကျ လှတျလပျခှငျ့ပါဘဲ ၊ မငျး ဒီထပျပိုကောငျးမှနျတဲ့ဘဝကိုပိုငျဆိုငျရပါစေ ” ၊ “ “ဒါကသခြောပေါကျ အသဈအဆနျးတဈခုပဲ၊ ဒါမဲ့ ဘဝကပြျောဖို့တိုတောငျးလှနျးတယျ၊ မငျးအနိုငျရမှုတိုငျးကိုဂုဏျယူလိုကျပါ ၊ မှနျကနျတဲ့ရှေးခယျြမှုအတှကျဂုဏျယူပါတယျ ” ဟူတဲ့အပွုသဘောဆောငျမှနျခကျြမြားစှာဖွငျ့ တုံ့ပွနျပေးခဲ့ကွပါတယျ။
Be the first to comment on "တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ခင်ပွန်းကို တရားဝင်ကွာရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ပါတီပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး"